Norway: Maalintan ayaa la isku raacay inay ciida noqon doonto. - NorSom News
Norway: Maalintan ayaa la isku raacay inay ciida noqon doonto.
Sida ay noo xaqiijiyeen maamulka masaajida waaweyn Ee muslimiinta Norway, ururada muslimiinta iyo masaajida ay maamulaan, ayaa sanadkan isku raacay inay Maalinta axada ah Ee 24-ka bishan Mai, ay noqoto maalinta ciida ah. Maalinta beri ahna Ee sabtidana ay noqon doonto 30-ka bisha Ramadaan.
Sidoo kale qaar kamid ah dalalka islaamka Ee waaweyn ayaa iclaamiyay in ilaa hada aan la xaqiijin aragtida bisha, sidaas darteedna ay beri tahay maalin soon ah.
Previous articleVideo: Sh Cali: Fadliga bisha Ramadaan ugu gurmada Magaalada Doollow.
Next articleDaawo: Culimada Norway, maxey ka dhaheen ciida muslimiinta Norway.